मनोविद् रमा कार्कीको टिप्सः कोरोनाको मनोवैज्ञानिक त्रासबाट कसरी बच्ने?
निको भएका ३,३७०,०४४
निको भएको ३६५
अपडेटः 2020-06-06 18:11:31 बजे ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासका बीच मुलुक अहिले गम्भीर मनोविज्ञानमा प्रवेश गर्दैछ। यति बेला कोरोनाको जोखिम देशभित्र जति छ, त्यति नै ‘सेल्फ आइसोलेसन’ मा बसेका नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक विचलनले गाँज्दै लगिरहेको छ।
आपतको यस घडीमा हामी नेपालीको मनोविज्ञान कोरोनालाई कसरी रोकथाम गर्नेमै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ त्यसमा दुईमत छैन। तर, वर्तमान वातावरणमा अनिश्चितता, डर, त्रासको मनोविज्ञानले हामीलाई कताकता चस्स घोचेको छ। केही हदसम्म यो स्वभाविक पनि हो।
अरु विकसित देशले नियन्त्रण गर्न नसकेको नयाँ भाइरस हामी जस्तो अविकसित मुलुकले धान्न कसरी सक्ला? सबैको सोच अहिले यही आएर टक्क अडिएकाे छ। फेरि विपतको बेला सरकारबाट भएकाे हेलचक्राईं र ठट्टाले आम मानिसलाई थप त्रासमा बाच्न बाध्य पारेकाे छ।
आपतकालीन अवस्थाका लागि सधै तयार हुनुपर्छ भन्ने पाठ ८ वर्ष अघिमात्र नेपालमा गएकाे महाभूकम्पले सिकाइसकेकाे थियाे। त्यति बेला मुलुकले भाेगेकाे विभिन्न मनोवैज्ञानिक घाउँ सुक्न नपाउँदै हामी अर्को महारोगको विपत्तिसँग जुध्ने तयारीमा छौं।
यसको रोकथाम वा भित्रिन नदिने दुविधाका बीच हामीले ठूलो अवसर गुमाइसकेका छौं। तर, विश्वलाई हेरेर सिक्ने पाठ अझै समाप्त भइसकेकाे छैन। यसका लागि सबैजना असल हुने बेला आएको छ। एकजुट हुनेबेला आएको छ।
क्वारेन्टाइनबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। घरभित्र बस्ने र सबै रोकथामको उपाय अपनाउने। आज सिङ्गो संसार नै विषम महामारीबाट गुज्रिएको बेला हाम्रो सानो देशले पनि यो महामारीबाट बच्न ‘घरमै बसे सुरक्षित होइन्छ’ भन्ने नारालाई अगाडि सारेको छ।
मानिसहरुमा यति बेला अनिश्चितता, डर र त्रासले डेरा जमाएकाे छ। वर्ग र व्यक्ति पिच्छे टोल र छिमेकमा नकरात्मक मनोविज्ञान र व्यवहारिक समस्या विस्तारै बढ्न थालेका छन्।
‘दिएको राहत पनि पकाउन मन छैन। काम पनि छैन,’ भन्ने उद्गारका पंक्तिहरू यदाकदा सुनिन थालेका छन् भने रोग लुकाउने प्रवृति बढ्दै जाँदा दिनहुँ आउने थरीथरीका समाचारले आम मानिसमा एकप्रकारको वितृष्णा जाग्न थालेको छ।
दैनिक कृयाकलापमा आएकाे हेरफेरले एक प्रकारको निराशा आमवर्गमा देखिन थालिसकेको छ। तर ‘घरबसी आफू सुरक्षित हुनु’ बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन।
अहिलेको परिस्थितिमा देखिएका केही मनोवैज्ञानिक परिवर्तन र समाधानको उपाय यस प्रकार छन्ः
१ शारीरिक रूपमा हामी टाढा भएपनि भिडियो कल, फोन कल र च्यानलबाट नजिक भई एकअर्काको हालखबर सोध्न सक्छौं।
२ घरको दैनिकी काममा आफू र बालबालिकालाई व्यस्त बनाउन सक्छौं।
३ बालबालिकालाई दैनिकी बनाएर नयाँ काम दिन सक्छौं।
४ व्यस्त भएका बाबुआमाको लागि आफ्नो बालबालिकाको कुरा सुन्ने र बुझ्ने अवसर पनि हो यति बेला। तर, यसका लागि हामी निकै संयमित हुनुपर्छ।
५ सबै उमेर वर्गको लागि लामो श्वास फेर्ने र व्यायाम गर्नु लाभदायक हुन्छ र व्यवहारिक पनि।
६ अलि फराकिलो घर छ भने करेसाबारी वा फुलबारीमा काम गर्ने अवसर पनि हो। यसले हामीलाई व्यस्त राख्न मद्दत गर्छ र हामी काम गर्दा सजक पनि हुन्छौं। यसलाई मानसिक स्वास्थ्यमा ‘अकुपेशन थेरापी’ पनि भनिन्छ।
७ यदाकदा महिला हिंसाको जोखिमका घटना आइरहँदा विभिन्न टोल, नगरपालिकाले सूचना प्रवाह र सुरक्षाको प्रत्याुभूति जनमानसमा गराउन सक्छ।
प्रकाशित मिति: Apr 06, 2020 12:40:32
के नेपालको कारण सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध भएको थियो?
मोदीले ओलीसँग संवाद नगरी राजदूतले बाँस्कोटासँग छलफल गर्नुको अर्थ
बिसञ्चो छ अमेरिकालाई तैपनि सञ्चै छौं हामी नेपाली
लकडाउन, संग्लिएको धर्ती र सुनको कचौरामा भीख
साइकलमैत्री शहर बन्दै लिस्बन: साइकल मोबिलिटी प्रोजेक्टमा मात्रै ३० लाख युरो खर्च गरिँदै, सरकारी अनुदानमा किन्ने होइन त साइकल?
यसरि भइरहेको छ एमसीसीको विरोध र समर्थन
सहरमा पाइला टेक्ने सोच मात्रै छ गाउँसँग
रूकुम नरसंहारको ‘चुरो’ मानसिकतामै खोट
नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, र अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको पुनर्संरचना: गुमेको एक ऐतिहासिक तथा स्वर्ण अवसर
राजा वीरेन्द्रले भारतीय दूतलाई भनेका थिए– देश बेचेर मलाई राजा भइरहनु छैन : नवराज सुवेदी
नवराज सुवेदी,राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष
वीरगञ्जको फोटो स्टुडियो प्रकरणमा पक्राउ परेका ४ जनामाथि बाल यौन दुर्व्यवहार मुद्दा दायर
देशभरि भारुको साटो नेपाली रुपैयाँ चलायौँ, बल्ल सबैलाई नेपाली महसुस भयो : हिमालयसमशेर राणा (भिडियो)
सरकारले हाम्रो विधेयक ग्रहण गरेन भने हामी सरकारी विधेयकको विपक्षमा भोट हाल्छौँ: लक्ष्मणलाल कर्ण, राजपा नेता (भिडियो)
मृत्यु भएकी आमालाई ब्युझाउन खोज्ने बालकलाई शाहरुखको सहयोग
काठमाडौँकै प्रतीक्षालयमा आमाको किरिया, साथमा छिन् मिर्गौलारोगी श्रीमती
एमसिसीबारे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राखेका १५ बुँदे फरक मतको पूर्णपाठ
सेवा नै सौख : समुद्रपारदेखि सरिताको समाजसेवा
सेलिब्रेटीहरू हैरान छन् ‘फेक अकाउन्ट’ले
मेलापात र वनपाखा चाहर्ने एउटा गायकको ग्रामिण जीवनशैली
लकडाउनले जर्मनीमा अड्किएका मूर्तिको नेपालमा झल्को
विलासी सरकारका 'अभिशप्त' नागरिक
एमसीसीको मन्द बिष : अमेरिकाको नियत बुझौं, आगत सोचौं